Isku-darka Haydarooliga Saxaafadda, Smc Haydarooliga Saxaafadda, Sawirka Sawirka Qoto dheer - Zhengxi
saxaafadeed isku dhafan
Sawir qoto dheer oo saxaafadeed
Powder sameynta saxaafadda haydarooliga
Albaabka ku xardhaya saxaafadda Haydarooliga
Qaboojiyaha foojignaanta saxaafadda
Foornada Saxaafadeed ee Haydarooliga
Mashiinka foorarsiga CNC
Ku saabsan ZHENGXI
Dalxiiska Warshadda VR
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay shirkaddu soo saarto, sida makiinadaha isku-dhafan ee Haydarooliga, cadaadiska fiiqan ee hidda-hawo-gelinta [...]Akhri wax dheeraad ah
Diirad saarida qalabka korontada ku shaqeeya ee qalabka otomaatigga ah iyo aqoon isweydaarsiga aan cidi wadin.Akhri wax dheeraad ah
Diirad saarida adeegga iibka kadib Taageero bixinta qalabka dayactirka. Dhammaan shaqaalaha shirkadda [...]Akhri wax dheeraad ah
Chengdu Zhengxi Haydarooliga
Waxay wadday wadashaqeyn dhow jaamacado badan oo caan ah oo caan ah iyo machadyo cilmi baaris muddo dheer waxaana ka go'an inay noqoto hormuudka tikniyoolajiyadda ee mashiinka mashiinka haydarooliga.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay shirkaddu soo saarto, sida makiinadaha isku-dhafan ee isku-dhafan, kuwa cadaadiska ku shaqeeya ee hidda-baarka, budo sameynta makiinado hiddo-wadayaal ah, been-abuurka makiinado, iyo toosinta mashiinnada Haydarooliga, ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyeen macaamiisha gudaha iyo kuwa shisheeye.
Isku darka SMC BMC Haydarooliga ...
4 tiir sawir qoto dheer hydra ...
Automatic Ferrite Magnetic ...
Automatic SMC Production Li ...
Warshad 1: 9000SQM Warshad 2: 48000SQM
Qiyaastii 150 qof
In ka badan 60 nooc
Qiimaha Mashiinka Waxsoosaarka ee 2017
Nidaamka ugu weyn uguna qalabeysan ee ka shaqeeya gobolka Sichuan
Chengdu Zhengxi Qalabka Haydarooliga Warshadaha Co., Ltd. waxay ku taal aagga Qingbaijiang ee Bilaashka ah ee Ganacsiga Bilaashka ah ee Chengdu. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag dhan 45,608 mitir murabac, oo ay ku jiraan aag aqoon-isweydaarsi culus oo gaaraya 30,400 mitir murabac ah. Waa soo saare xirfadlayaal baaxad weyn leh oo ka shaqeeya matoorrada Haydarooliga ee Shiinaha. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 100 injineero iyo farsamo-yaqaanno iyo daraasiin shatiyadaha hal-abuurka qaran. Waxay wadday wadashaqeyn dhow jaamacado badan oo caan ah oo caan ah iyo machadyo cilmi baaris muddo dheer waxaana ka go'an inay noqoto hormuudka tikniyoolajiyadda ee mashiinka mashiinka haydarooliga.
Si si wanaagsan loogu adeego macaamiisha, Kooxda Zhengxi waxay sidoo kale dhidibada u aastay laba laamood: Chengdu Zhengxi Robotics Co., Ltd.-oo diiradda saareysa qalabka hawo-qaadashada ee qalabka otomaatigga ah iyo aqoon isweydaarsiga aan cidi wadin; Chengdu Zhengxi Smart Technology Co., Ltd.-oo diiradda saareysa adeegga iibka kadib Taageer bixinta qalabka dayactirka. Dhammaan shaqaalaha shirkadda waxay sameeyaan dadaal aan kala go 'lahayn oo loogu talagalay "Zhengxi" si ay u noqoto sumcad caalami ah oo caan ah!
Shirkaddayadu waxay kordhisaa isticmaalka heerarka qaranka iyo warshadaha, waxay si adag u xakameysaa geeddi-socod kasta, waxay dammaanad qaadaysaa tayada qayb kasta. Ka dib marka qalabku u jilco macaamilkeenna, waxaan samayn doonnaa sahan buuxa oo ku saabsan waxqabadka qalabkeenna, ka dibna waxaan horumarin doonnaa tikniyoolajiyadeena iyo tayadeena. Waxaan sidoo kale helnay shahaadada ISO9001: 2008 iyo CE. Shirkaddu waa tan ugu weyn uguna nidaamka dhammaystiran ee ka shaqaynta gobolka Sichuan.
Shirkadda Chengdu Zhengxi ee soo saarta qalabka korontada ayaa si buuxda u fulisa nidaamka tayada ISO9001 waxayna si adag u fulisaa saddex kormeer oo soo saar ah, kuwaas oo kala ah kormeerka alaabta ceyriinka ah, kormeerka nidaamka, iyo kormeerka warshadda; tallaabooyinka sida is-kormeerka, kormeerka labada dhinac, iyo kormeerka gaarka ah ayaa sidoo kale lagu qaatay habka wareegga wax soo saarka si loo hubiyo tayada wax soo saarka. Hubso in alaabooyinka aan waafaqsaneyn aysan ka bixin warshadda. Abaabulaan wax soo saarka si waafaqsan shuruudaha isticmaalaha iyo heerarka qaranka ee la xiriira, soo bandhig alaab, iyo hubi in alaabooyinka la bixiyay ay yihiin alaabooyin cusub oo aan la adeegsan, waxaana lagu sameeyaa alaabada ceeriin ee habboon iyo tikniyoolajiyad casri ah si loo hubiyo in tayada wax soo saarka, qeexitaannada iyo waxqabadka ay waafaqsan yihiin shuruudaha isticmaalaha. Alaabada waa in loo raraa hab ku habboon, baakadka iyo calaamadeynta waa inay waafaqaan heerarka qaranka iyo shuruudaha isticmaalaha.
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag dhan 45,608 mitir murabac, oo ay ku jiraan aag aqoon-isweydaarsi culus oo gaaraya 30,400 mitir murabac ah. Waa xirfadle baaxad weyn [...]
Lambarka 1698, Zhihui Avenue, Degmada Qingbaijiang, Chengdu Shiinaha.